KAIMAY TRADING PTE LTD (Projects & Wholesaler): ရည်ရွယ်ချက်
KAIMAY TRADING PTE LTD (Projects & Wholesaler)
Kelvin NG - 9008 7028 (Email: kelvin@kaimay.com.sg) UEN: 198502422N / GST Reg No: M2-0071768-6
ကျွန်တော်တို့ Kaimay Trading Pte Ltd သည် 1985 ခုနှစ်ကတည်းကစ၍ Singapore တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ (7Stars, 96 Budget Living, AC Furniture, A's Design, Beds.sg (FortyTwo), Brighton Furniture, Beng Tuan, Ban Hin, Chaimay, Choon Hin, Defu, DK, Dezier, Eleon, EN Holding LLP, Excellent, Furniture Mart, Furniture.com.sg, Gaphiler, Jurong East, Jurong West, K & D, Keat Hong, Lee Furniture, Majesty, New Best City, Omega, Siang Mu, Silver River, TPY177, Vickson) အစရှိတဲ့ Furniture ဆိုင်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ကို နေ့စဉ် Furniture ပစ္စည်းများ Supply လုပ်ပေးနေသော Wholesaler Furniture Company ကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ Furniture ဆိုင်များသည် ၄င်းတို့ Customer များ ၀ယ်ယူသွားသော Furniture ပစ္စည်း များကို ကျွန်တော်တို့ Company သို့ Purchase Order အဖြစ် ၄င်းတို့ Invoice များကို Fax ထိုးပေးကြပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ Company ကလည်း အထက်ဖော်ပြပါ ဆိုင်များမှ ၀ယ်ယူသွားသော Customer များဆီကို Furniture ဆိုင်များကိုယ်စား ၄င်းတို့ရဲ့ Invoice Copy များသုံး၍ Delivery ပို့ပေးရပါသည်။ Customer များဆီမှ ၄င်းတို့ကိုယ်စား Balance ငွေများ သိမ်းပေးခဲ့ပြီး လကုန်တဲ့အခါမှ ထို Furniture ဆိုင်များနှင့် ကျွန်တော်တို့ စာရင်းရှင်းကြပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါ Furniture ဆိုင်များရဲ့ Tax Invoice တွေကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ ရွှေမြန်မာများရဲ့ နာမည်တွေကို စိတ်မကောင်းစွာ တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ရွှေမြန်မာ အများအပြားဟာ အထက်ဖော်ပြပါ Furniture ဆိုင်များမှာ Furniture ပစ္စည်းများကို ကျွန်တော်တို့ Company က အဆိုပါ Furniture ဆိုင်များကို ဖြန့်ပေးတဲ့ Wholesale Price ထက် များစွာ မြင့်မားတဲ့ ဈေးနှုန်းတစ်ခုနဲ့ ၀ယ်ယူနေကြရတာကို တွေ့နေရပါတယ်။ ပစ္စည်း အသေးအဖွဲလေးတွေမှာ ဈေးသိပ်မသိသာပေမယ့် Bedroom Set တွေ၊ Wardrobe အကြီးကြီးတွေလိုမျိုးတွေ ၀ယ်ယူတဲ့အခါမှာ ချွေးနည်းစာ လုပ်အားခပိုက်ဆံတွေ လိုအပ်တာထက် ပိုသုံးနေရတာကို စိတ်မကောင်းစရာ တွေမြင်နေရပါတယ်ဗျာ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် Boss ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ကိုတောင်းခံပြီး ကျွန်တော်တို့ Myanmar Society အတွက် သင့်တော်မယ့် ဈေးနှုန်းတစ်ခုနဲ့ Furniture များ ရောင်းချပေးရန် ရည်ရွယ်ပြီး ဒီ Website လေးကို ဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ရွှေမြန်မာတွေ Furniture များဝယ်ယူတော့မယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် မေးမြန်း စုံစမ်းချင်တယ်ဆိုရင် naythwin@kaimay.com.sg (or) kelvin@kaimay.com.sg ကို email ပို့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ 9008 7028 ကို SMS ဒါမှမဟုတ် Phone ခေါ်ဆိုပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် အခမဲ့ အကြံဥာဏ်များ တောင်းဆိုနိုင်ကြပါတယ်။ Furniture အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ 12 နှစ်ကျော်လောက် အတွေ့အကြုံကောင်းများရှိခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်း ကျွန်တော်တို့ ရွှေမြန်မာ ညီအစ်ကို မောင်နှမများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ ရွေးချယ်မှုများ မှန်ကန်စွာ ချမှတ်နိုင်အောင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည် မျှော်လင့်မိပါတယ်။
Kelvin Ng (ကိုနေသွင်)
HP: 9008 7028
66 Sungei Kadut Loop, # 03 - 00
1. Bedframe/ Double Deck (Metal)
2. Bedframe/ Double Deck (Wood)
5. Chest of Drawer
7. Dining Set (Wood)
8. Dining Set (Glass)
10. Mattress (MaxCoil)
14. TV Cabinet
1. Canteen Set
2. Metal Cabinet / Metal Locker / Filing Cabinet / Bolt-less Rack
3. Office Table (Grey)
4. Office Table (Cherry)
5. Office Table (Beech)
6. Office Table (Walnut)
7. Office Table (China)
8. Office Chiar
9. GS Foldable Table
11. Bar Chair
12. Banquet Chairs & Tables
13. School Chairs
14. Manual Wheel Chair
15. Plastic Chiar / Stool
1. Bedframe & HeadBoard
2. Divan&HeadBoard (Single)
3. Divan&HeadBoard (Super)
4. Divan&HeadBoard (Queen)
5. Divan&HeadBoard (King)
Transportation - $ 30 / trip
All prices are subject to GST 7%
Payment: Cash on Delivery (C.O.D)
Cash or Nets upon collection
Only Company Cheque is acceptable.
Purchased items are No Refund or Exchange.
Mon ~ Fri: 10:00am - 6:00pm
Sunday & PH: No Delivery
Kelvin Ng - 9008 7028
UEN: 198502422N GST Reg No: M2-0071768-6
Kelvin Ng HP : +65-9008 7028 Tel : +65-62690198 Fax : +65-6269 0266 Email: kelvin@kaimay.com.sg
Copyright (c) 2010 KAIMAY TRADING PTE LTD (Projects & Wholesaler). Designed by Blogger Templates